Mod Player: Sida loo Play Files mod
> Resource > Video > Sida loo Play Files mod
Mod waa qaab lagu duubo si weyn loo isticmaalay digital kaamirada, sida, JVC ka Panasonic iyo Canon on a. Tani waa qaab aad u xanibayo in la isticmaalo, maxaa yeelay, waxay ku guuldareysto in ay ka shaqeeyaan ciyaartoyda loogu jecelyahay saxaafada, codsiyada iyo wax ka badan. Haddii aad qabto dhibaatooyin ka ee haya'ad faylasha mod aad ciyaaryahan warbaahinta ee hadda jira sida Windows Media Player; waxaa jira qaar ka mid ah cross-madal ciyaartoyda kale hogaanka mod sidii xal kale. Waxba ma ahan wixii nidaamka hawlgalka computer yahay, waxaad ka ciyaari kartaa faylasha mod si habsami leh. Fiiri ugu sareeya 3 ciyaartoy mod heli karo. Laakiin haddii aad loo isticmaalaa in ciyaaryahanka asal ah warbaahinta oo aan ku taageeri mod ah, diinta faylka mod waa xalka keliya.
Sida loo Play Files mod by diinta mod
The Wondershare Player waa ciyaaryahan warbaahinta awood badan oo smart. Waxaa loogu tala galay si ay u ilaaliyaan loo maqli sare oo tayo leh iyadoo wax dhibaato ah sida discordance ee dhawaaqa iyo sawirka ama sawir granulation. Waxa ay taageertaa dhow oo dhan oo caan video iyo maqal ah qaabab, oo ay ku jiraan mod, MKV, MTS, NSV, OGM iyo wax ka badan. The interface oo quruxsan oo user-friendly ayaa sidoo kale ka dhigaysa in ay u fududahay in la xakameeyo horumarka loo maqli ah. Haddii aad rabto in aad ugu wanaagsan ee tayada for free, waan hubaa Wondershare Player noqon lahaa kale oo ku haboon adiga. Waa maxay sababta ma aha in aad u siiyo go a?
VLC media player waa ciyaaryahan saxaafad xor ah oo furan isha la qoraalkii ay socon for Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, BeOS, MorphOS, BSD, baabuur, macruufka iyo eComStation . Waxay jecel yahay sumcad sare ay sabab u tahay audio iyo video qaab taageero ballaaran, durayo Cinwaan, la dhisay-in muuqaalada tafatirka aasaasiga ah iyo sidoo kale awooda diinta. Waxaad u isticmaali kartaa in ay la tacaalaan qaab video kasta, oo ay ku jiraan mod ah.
Waxaad kala soo bixi kartaa ciyaaryahan mod ka site VLC .
Mplayer sidoo kale waa ciyaaryahan isha saxaafad xor ah oo furan. Inkastoo MPlayer ma aha sida loo jecel yahay sida VLC, waxa ay leedahay hawlaha la mid ah sida VLC media player. Waxaa diyaar u ah dhammaan nidaamyada hawlgalka weyn oo ay ka mid yihiin Linux iyo Unix-sida nidaamyada kale iyo Microsoft Windows iyo sidoo kale Mac OS X. On top of in, waxa ay sidoo kale taageertaa kala duwan oo qaabab warbaahinta sida mod, MPEG VOB,, ASF , WMA, wmv, cancer, QT, MOV, MP4, AVI, OGG, OGM, RealMedia, Matroska, lowska, NuppelVideo iyo wax ka badan.
Waxaad kala soo bixi kartaa ciyaaryahan mod ee aad Mac OS X ka site Mplayer .
Waxaa jira laba xaaladood oo aad u baahan doontaa in aad beddelid files mod. Mid ka mid ah hore waa meesha aad rabto doonaa in Radidiyaha aad files mod on a software, barnaamijka ama codsiga in uusan taageeri qaab file mod. Kale waa in la badalo faylasha mod loogu isticmaalo dheeraad ah oo ku saabsan codsiyada sida Adobe jilitaankii ama qalabka sida iPhone, iPad, casriga ah iyo iwm si loogu badalo file ah mod in qaab kasta oo kale oo aad u baahan tihiin, Continue Reading: badalo mod in MP4 . Haddii aad u baahan tahay caawimaad kale oo kasta, si xor ah u la xiriir kooxda Support ee.